Wararka Maanta: Arbaco, Jun 5 , 2013-Prof. Axmed Ismaaciil Samatar oo si weyn loogu soo dhaweeyay Magaalada Boorame ee Gobolak Awdal (SAWIRRO)
Boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee degmadaas, kuwaasoo gacmaha u haatinayay Prof. Samatar oo gaari dusha ka furan saarnaa, halkaasoo uu dadka ka salaamayay.
Imaanshihiisa kaddib ayuu warbaahinta la hadlay isagoo sheegay in sidii loo soo dhaweeyay ay qiiro gelisay, wuxuuna sheegay inuu maalmo ku sugnaan doono Boorame oo uu deegaan ahaan kasoo jeedo.
Prof. Samatar ayaa dhawaan iska casilay xildhibaannadii baarlamaanka Soomaaliya isagoo sheegay inuu doonayo inuu howlo isaga u gaar ah qabsado, balse wuxuu diiday inuu tagayo Somaliland.
Dhawaan ayuu Prof. Samatar oo wax ka dhiga jaamacad ku taalla dalka Mareykanka uu ka dagay magaalada Hargeysa, halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyay wuxuuna sheegay in Somaliland ay tahay deegaankii uu kasoo jeeday.